BBC Somali - Aqoon Guud - Shareecada iyo Garsoorka
7 September, 2011, 09:38 GMT 12:38 SGA
Shareecada iyo Garsoorka
Tani waa markii ugu horeysay ee dastuur Soomaaliya ay leedahay lagu tilmaamo inuu yahay mid waafaqsan Shareecada, ayadoo shareecadu tahay asaaska dastuurka. Dastuurkii 1990 wuxuu yiri, "Shareecada Islaamku waa il muhiim ah oo sharcigu leeyahay" (Qodobka 3), sidaa darteed in lagu sifeeyo kan inuu yahay mid Shareecada Waafaqsan waa arin cusub.
Sida ku cad Cutubka 1aad, Qodobkiisa 1, Dastuurka Qabyada ah waxaa ujeedadiisu tahay inuu noqdo mid Shareecada waafaqsan oo arintaasi waxay tilmaameysaa in isaga naftiisu waafaqayo Shareecada oo uu mamnuucayo wixii sharci ah oo la ansixiyo ee ka hor imaanaya Shareecada. Sida ay qabaan khubarada dastuurka, dastuuradii hore ee Soomaaliya waxay lahaayeen qeybo waafaqsanaa Shareecada, laakiin Dastuurka Qabyada ah waa kan ugu waaqfasan Shareecada marka loo bar bar dhigo dastuuradii Soomaaliya ay lahaan jirtay oo dhan.
Marka loo eego Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga ah iyo qaar ka tirsan culimada diinta Islaamka, waxay soo baareen qodob walba oo kujira Dastuurka Qabyada ah, oo dhammaantood way waafaqsan yihiin Shareecada. ( Soo koobida iyo Tilmaameha Suaalaha Dastuurka Qabyada ah, ee uu daabacday Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga ah 30/7/2010, p3).
Waxaa ku xusan Mabaadiida Aasaasida in Shareecadu tahay aasaas (Qodobka 1) waxayna ugu jirtaa arintani dhisida xiriirka ka dhexeeya dowlada iyo diinta (Qodobka 2).
Qodobka 64. Maxkamadaha
(1) Waxaa jira hal nidaam oo kusaabsan sharciga maxkamada kaasoo midaysan looguna tala galay Jamhuuriyada sida ku cad Cutubka 10aad.
(2) Inkastoo sida ku xusan sharciga (1) qaabab dhaqameedka maxaliga ah ee lagu xalliyo khilaafaadka laga yaabo in ay sii socdaan, ma khilaafayaan Shareecada iyo dastuurka.
Qodobka 120. Maxkamada Ugu Sareysa
(3) Garsooreyaasha Maxkamada Ugu Sareysa waxay lahaan doonaan aqoonta ku haboon Shareecada iyo Sharciga;
Ma jiraan tixraacyo ay leeyihiin wax walba oo qoraalkaan ku xusan kuwaasoo ku saabsan ciqaabihii xagga jirka ah ee ka dhacay Sucuudi Carabiya iyo Sudan ( karbaash, gacma goyn iyo dil) ayadoo la adeegsanayo Shareecada magaceeda.
Qodobka 20 bilowgiisa waxaa kujira sidatan:
(2) Qofi wuxuu xaq u leeyahay inuu helo amniga shakhsiga. Amniga Shakhsiga waxaa kujirta ka xor ahaanshaha in laguu xiro si aan sharci ahayn, nooc kasta oo carqalad ah oo ka imaanaysa dadweynaha ama ilaha khaaska ah, ka xor ahaanshaha nooc kasta oo jir dil ah, iyo ka xor ahaanshaha nooc walba oo xaasidnimo ah iyo in loo dhaqmo si dareenka bini-aadninimo ka baxsan ama dullayn amaba in la geysto ciqaab.
Arintani waxay ka dhigaysaa ciqaabaha noocaan ah kuwo aan waafaqsanayn dastuurka.
Shirka Maraykanka iyo Afrika
Dagaalkii koowaad ee adduunka WW1
Sharciga cusub ee tagaasida Minneapolis